Lamentations 3 NIV – Kwadwom 3 ASCB | Biblica
Lamentations 3 NIV – Kwadwom 3 ASCB
1Mene ɔbarima a mahunu amane
wɔ nʼabufuo abaa ano.
2Wapam me afiri ne ho ama manante
mpɛn bebree, ɛda mu nyinaa.
4Wama me wedeɛ ne me nam anyini
5Waka me ahyɛ mu,
ɔde nwononwono ne ahokyere atwa me ho ahyia.
6Wama matena esum mu
sɛ wɔn a wɔawuwu dada no.
7Wato ɔfasuo atwa me ho ahyia enti mentumi nnwane;
wagu me nkɔnsɔnkɔnsɔn ama matɔ baha.
8Mpo sɛ mefrɛ anaasɛ mebɔ mpaeɛ srɛ mmoa a
ɔsi me mpaeɛbɔ ano.
9Ɔde abotan asi me ɛkwan;
te sɛ gyata a watɛ,
11ɔtwee me firi ɛkwan no mu dwerɛɛ me
na ɔgyaa me a menni mmoa biara.
12Ɔkuntunuu ne tadua mu
13Ɔde bɛmma a ɛfiri ne kotokuo mu
hwiree mʼakoma mu.
14Meyɛɛ asredeɛ maa me nkurɔfoɔ nyinaa;
de di me ho fɛ ɛda mu nyinaa.
15Ɔde nhahan nwononwono ahyɛ me ma.
16Ɔde aboseaa abubu me se;
na watiatia me so wɔ mfuturo mu.
17Wɔama asomdwoeɛ abɔ me;
na mewerɛ afiri yiedie.
18Enti mese, “Mʼanimuonyam asa,
deɛ mede mʼani too so Awurade mu no nyinaa.”
19Mekae mʼamanehunu wɔ mʼakyinkyini mu,
nwononwono ne bɔnwoma mu.
na me kra aboto wɔ me mu.
21Nanso, mekae yei
ne saa enti, mewɔ anidasoɔ.
22Awurade dɔ kɛseɛ enti yɛnnsɛeɛ.
Nʼayamhyehyeɛ nni hwammɔ.
23Ɛyɛ foforɔ anɔpa biara;
wo nokorɛdie yɛ kɛseɛ.
24Meka kyerɛ me ho sɛ,
25Awurade yɛ ma wɔn a wɔn anidasoɔ wɔ ne mu,
onipa a ɔhwehwɛ noɔ no;
26Ɛyɛ sɛ wɔyɛ komm
de twɛn Awurade nkwagyeɛ.
27Ɛyɛ ma ɔbarima sɛ ɔsoa kɔnnua no
wɔ ne mmeranteɛ ɛberɛ mu.
ɛfiri sɛ Awurade de ato no so.
29Ma ɔmfa nʼanim nsie wɔ mfuturo mu,
ebia anidasoɔ wɔ hɔ.
30Ma ɔmfa nʼafono mma deɛ ɔpɛɛ sɛ ɔbɔ no
na ɔnhyɛ no aniwuo.
31Na Awurade nto nnipa ntwene koraa.
32Ɛwom, ɔde awerɛhoɔ ba deɛ, nanso ɔbɛnya ayamhyehyeɛ.
Ne dɔ kɛseɛ no to rentwa da.
33Ɔfiri amemenemfe mu de amanehunu
anaa awerɛhoɔ brɛ nnipa mma.
34Sɛ wɔde wɔn nan dwerɛ
nneduafoɔ a wɔwɔ asase no so a,
35sɛ wɔtiatia obi ahofadie so
36anaa sɛ wɔbu obi ntɛnkyea a,
Awurade nhunu saa nneɛma yi anaa?
37Hwan na ɔbɛtumi aka na wama aba mu
wɔ ɛberɛ a ɛnyɛ Awurade na ɔhyɛeɛ?
na musuo ne nnepa firi anaa?
39Adɛn enti na ɛsɛ sɛ ɔteasefoɔ nwiinwii
ɛberɛ a wɔatwe nʼaso wɔ ne bɔne ho?
na yɛnsane nkɔ Awurade nkyɛn.
41Momma yɛmma yɛn akoma ne yɛn nsa so,
nkyerɛ Onyankopɔn wɔ ɔsoro, na yɛnka sɛ:
42“Yɛayɛ bɔne, na yɛate atua
na woamfa ankyɛ.
43“Wode abufuo akata wo ho ataa yɛn;
na wakunkum a woannya ahummɔborɔ.
enti mpaeɛbɔ biara nnuru wo nkyɛn.
45Woayɛ yɛn atantanneɛ ne wira
46“Yɛn atamfoɔ nyinaa abae wɔn anom tɛtrɛɛ
47Yɛabrɛ ne ahunahuna ne akukuruhweaseɛ,
mmubuiɛ ne ɔsɛeɛ.”
48Me nisuo sene sɛ asutene
ɛfiri sɛ wɔasɛe me nkurɔfoɔ.
49Me nisuo bɛsene ara,
50kɔsi sɛ Awurade bɛhwɛ
afiri ɔsoro, na wahu.
51Deɛ mehunu no ma me kra werɛ ho
me kuropɔn no mu mmaa nyinaa enti.
52Mʼatamfoɔ a menyɛɛ wɔn hwee
53Wɔpɛɛ sɛ wɔtwa me nkwa so
na wɔsi me aboɔ wɔ amena mu;
54nsuo bu faa me tiri so,
na ɛyɛɛ me sɛdeɛ wɔrewie me.
55Mebɔɔ wo din, Ao Awurade
firi amena no ase tɔnn.
56Wotee me sufrɛ: “Nsi wʼaso
wɔ me gyeɛ sufrɛ ho.”
57Wotwe bɛnee me ɛberɛ a mefrɛɛ woɔ no,
na wokaa sɛ, “Nsuro.”
58Ao Awurade, wodii mʼasɛm maa me;
na wogyee me nkwa.
59Woahunu bɔne a wɔayɛ me, Ao Awurade.
60Woahunu wɔn aweretɔ no mu den,
wɔn pɔ a wɔbɔ tia me no nyinaa.
61Ao Awurade, woate wɔn sopa,
wɔn pɔ a wɔbɔ tia me no nyinaa,
62deɛ mʼatamfoɔ ka no sɛ asomusɛm na wɔka no brɛoo
63Hwɛ wɔn! Sɛ wɔgyinagyina hɔ anaa sɛ wɔtete hɔ,
64Fa deɛ ɛfata tua wɔn so ka, Ao Awurade,
deɛ wɔn nsa ayɛ enti.
65Pirim wɔn akoma,
66Fa abufuo taa wɔn, na sɛe wɔn
firi Awurade sorosoro ase.
ASCB : Kwadwom 3